arimaha jaceylka | Gaaloos.com
Home » galmada » arimaha jaceylka
Waxyaabo badan ayey necebyihin ragga kuna sababa jahwareer markey sameynayan xiriir jaceyl, ha u arkin inaa adiga waxad doontid sameyn kartid. Dabeecado qeebtood oo dumarka dhexdooda caadi ka ah ayaa ka takooran raga.
Raggu ma jecla dumarka maseerka badan, ogow ninkasta oo aad la socotid wuxu leeyahay asxaab kaa qurux badan waxana xaqiiqo ah iney jirto sabab u adiga kaga doortay. Hadaba kalsooni muuji cadeyneysa inaad u qalantid, hana ka maseerin gabdhaha uu saaxibka caadiga ah la yahey ama wadada ku arko.
Calaacalka badan oo xad dhaafka ah waxey ka ceyrisa qofka aad xiriirka la sameyneysid. sababtoo ah waxey ku dhalisa inuu adiga ka fakaro intu jaceyl kula jili laha oo ku shekeyn laha. Iska yareey calaalcalka badan
Suuraha badan waxey dareensisa nimanka iney wali joogan guriga hooyadooda. Waa haboontahay inaa sheegtid waxaad necebtahay laakinse waxa daran inaadan waxba jecleyn oo wax kasta uu kuu keenaba aad hadal ka bixisid. Gaar ahaan marka dhiiga qabtid hada suuro iyo qeylo badantahay is ilaali.
Maro ku dhag
Marka la joogtid qofka xiriirka la sameyneysid meelaha caamka ah iska ilaali inaa aad ugu dhagtid, waa caadi hada gacanta qabsatid laakiin ha isku marin. Waxyaabaha qeebtood kaliga qabso oo caawimaad intaas ha weeydisan, had iyo goor ha u dirin fariin(message) ee sii fursad uu nafiso oo kaligis ahaado. Qofna ma jecla in maalinti dhan hal qof la hadlo.
Title: arimaha jaceylka